Paid Search Optimization: ခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းဥပမာ Martech Zone
သင်အကူအညီတောင်းခံလျှင်သို့မဟုတ်ရှာဖွေပြီးသောကျွမ်းကျင်မှုကိုရှာဖွေလျှင်၊ PPC သူရဲကောင်းHanapin Marketing သည်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုမျှဝေသောကောင်းမွန်သောထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ Hanapin မကြာသေးမီကဒီစိတ်ကူး infographic, ထိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် PPC ၏ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားစျေးကွက်အတွက်အချက်အလက်များ။ အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်သည်ခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းဖြစ်သော်လည်းဤအကြံပြုချက်များသည် PPC (Pay Per Click) နည်းဗျူဟာများတွင်လစာရှာဖွေမှုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုထည့်သွင်းရန်ရှာဖွေသည့်မည်သည့်စျေးကွက်အတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အပန်းဖြေခရီးသွား 65 ည့်သည် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်စီးပွားရေးခရီးသွား ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းက ၀ က်ဘ်ကိုလှည့်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပြောဆိုကြသည်။ Hanapin Marketing သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်လမ်းညွှန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောလှပသောရုပ်ပုံများကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်သည်။ စျေးကွက်။
Paid Search Optimization အကြံပေးချက်များပါရှိသည်
သင့်ကိုယ်သင်ခွဲခြားပါ - သင်၏အပေါ်အချို့သောသုတေသနလုပ်ပါ ပြိုင်ဘက် '' PPC စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး နှင့်သင်၏ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခွဲခြား။
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများ - ပရိသတ်ကဘယ်နေရာကိုသွားရှာနိုင်မလဲ။ သင်၏ပူဇော်သက္ကာများကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ကွဲပြားစေရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ပါ။
Geo-Target - သင်အသုံးပြုထားသောရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးစရိတ်ကိုသင်ဖြုန်းတီးပါက၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒေသများရှိတည်နေရာများကိုသတ်မှတ်ပါ။
နေ့နှင့်နာရီအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထား - အလားအလာကောင်းများကိုမျှော်လင့်သည့်အခါသင်၏ပူဇော်သက္ကာများကိုသေချာစွာမြင်နိုင်ရန်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသိသိသာသာမြင့်တက်နိုင်သည်။
ROI အတွက်အကောင်းဆုံး - ကောင်းမွန်သောယာဉ်အသွားအလာရယူခြင်းသည်ကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ငွေတောင်းခံလွှာကိုမပေးချေ။ အသွားအလာမျှသာမဟုတ်ဘဲ ၀ င်ငွေကိုမောင်းနှင်နေသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
လေလံမဟာဗျူဟာ - သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ လေလံဆွဲသည့်မဟာဗျူဟာများကိုဖန်တီးပါ။ အသိအမြင်ရှိခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ အသွားအလာနှင့်စကားဝိုင်းများသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ပိုမိုသုံးစွဲခြင်းသည်အလွန်မြင့်မားသောလေလံများဖြင့်အသွားအလာဝယ်ခြင်းထက် ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
Display ကိုကင်ပိန်းပိုကောင်းအောင် - ကြော်ငြာနေရာချထားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမဟာဗျူဟာအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုမည့်အစားကြည့်ရှုရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
မည့် - PPC ဗျူဟာတိုင်းသည်ပြန်လည်မှတ်ချက်ပေးသည့်မဟာဗျူဟာရှိရမည်။ သင်၏ site ပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေသော visitors ည့်သည်များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းသည်လုံးဝဖြစ်လိမ့်မည် ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများတိုးမြှင့်.
Bing ကိုသုံးပါ - ခရီးသွား of ည့်သည်များ၏ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ခရီးသွားလာရေးအစီအစဉ်အတွက်ဝက်ဘ်သို့သွားကြသည်။ ၇၁% သောလမ်းကြောင်းသည် Bing (ဂူဂဲလ်မှမဟုတ်) Bing အတွက်သာဖြစ်သည်။
ကမ်းတက်စာမျက်နှာများကိုအကောင်းဆုံး - ကောင်းမွန်သောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရုံသာမကသင်၏ကြော်ငြာနေရာချထားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အရည်အသွေးမြင့်ရမှတ်များကိုလည်းရရှိစေသည်။ သင့်ရဲ့ဆင်းသက်စာမျက်နှာများကိုအကောင်းဆုံး!
Tags: hanapin စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပေးဆောင်ရှာဖွေရေးပေးဆောင်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကလစ်နှိပ်နှုန်းပေးဆောင်ချစ်သူppcppc စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိုင်းထီးဆိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းခရီးသွား
LeadSift - ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်လူမှုမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူပါ